Android ဖုန်းတွေအတွက် Browser အသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Opera – AsiaApps
Android ဖုန်းတွေအတွက် Browser အသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Opera
April 27, 2018 April 27, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Android ဖုန်းတွေအတွက် Browser အသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Opera
Opera ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းအငယ်ကပဲ “Opera Touch” အမည်ရှိတဲ့ Mobile Browser တစ်ခုကို Android ဖုန်းတွေအတွက်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Opera Touch browser ရဲ့ User Interface (UI) ကို Single-handed ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးရေးဆွဲထားပြီး Mobile မှာသာမက Desktop (သို့) Laptop တို့နဲ့ပါတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Single-handed ဒီဇိုင်းဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
Opera Touch ရဲ့ search bar အောက်ဆုံးမှာ မိတ်ဆွေဘက်က action ယူနိုင်မယ့် ခလုတ်လေး တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီခလုတ်ကနေ Tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Search address နောက်တစ်ခုကို ကူးပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Web Page URL ကို သိမ်းထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အစရှိတာတွေအားလုံးကို လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (အဲ့ဒီခလုတ်လေး တစ်ခုကပဲ Opera Touch ကို Single-hand UI ဒီဇိုင်း Browser ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးသွားတာပါ။)
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Opera Touch Browser မှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Web Page link တွေကို “My Flow” ဆိုတဲ့ Option မှာသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Web Page link တွေသာမက ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို အစရှိတာတွေကိုလည်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ပြောရရင် ဒီ Browser မှာ My Flow က မိတ်ဆွေရဲ့ Private zone ပါ။ သိမ်းထားတဲ့ဒေတာတွေ ပေါက်ကြားမှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ Opera ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာဖြစ်တာကြောင့် စိတ်အေးလက်အေး အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Opera Touch ကို Mobile မှာသုံးရမှာပျင်းလာလို့ Deskop (သို့) Laptop တစ်ခုခုကိုပြောင်းပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Mobile Browser ရဲ့ QR code ကို Desktop နဲ့ Scan ဖတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ (Desktop မှာ Opera Touch Browser သွင်းထားမှ QR code scan ဖတ်နိုင်မှာပါ။) QR code ကို Desktop ဘက်မှာ Scan ဖတ်ပြီး တာနဲ့ မိတ်ဆွေ Mobile Opera Touch browser ရဲ့ ဒေတာ တွေပါတစ်ပါးတည်း Desktop ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ My Flow မှာမှတ်သားထားတာတွေ၊ မိတ်ဆွေအဝင်အများဆုံး Website တွေ (အဟမ်း အဟမ်း… ?) နဲ့ History တွေအာလုံး Desktop ရဲ့ Opera Touch browser ကိုရောက်ရှိသွားမှာပါ။
Single-handed UI ဒီဇိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Browser တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုရတာပိုမိုအဆင်ပြေသွားသလို အလုပ်ရှုပ်တာလည်း တော်တော်လေးလျော့နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Opera Touch ကို Android device မှာပဲအသုံးပြုလို့ရနိုင်ဉီးမှာပါ။ IOS device တွေမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့တော့ User တွေအနေနဲ့ အချိန်တစ်ခုအထိတော့စောင့်မျှော်ရဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Android, iOS, Smartphone app, Web browsers
ဖွဘုတ်ရဲ့ Delight Text အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hahaha ???
Google Map ကို Offline အသုံးပြုနည်း